Home News Masuul sare oo katirsan Somaliland oo is casilay
Masuul sare oo katirsan Somaliland oo is casilay
Waxaa Goordhow ku dhawaaqay in uu is casilay Agaasimihii Guud Wasaarada Cadaaladda Soomaaliland Xuseen Maxamed Maxamuud.
Agaasimaha ayaa ka mid ahaa Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee booqashooyinka ku maraya deegaanada Bari ee Soomaaliland.
Shir Jaraa’id uu Maanta ku qabtay Magalada Burco ayuu ku sheegay in uu iska casilay xilkii Agaasimiha Guud ee Wasaarada Cadaaladda Soomaaliland.
Sababaha is casilaadiisa ayuu ku sheegay cadaalad daro uu ka tirsanayo Xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi,waxaana Maanta loo diiday inuu ka hadlo Xaflad Xariga looga jarayay Xabsi laga dhisay Magalada Burco.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi weli kama hadlin is casilaada Agaasimihii Guud Wasaarada Cadaaladda Soomaaliland waliba ka mid ahaa Xubnaha ku wehliya Safarka uu ku kala bixinayo Gobolada Bari ee Soomaaliland.
Previous articleHay’adda USAID ee kaalmada oo ku eedeysay Xaliimo Yareey ku takrifalka Gudiga Doorashadda
Next articleShaqaale shirkadeed oo lagu dilay magaalada muqdisho